Myanmar Gays Heaven: Yangon Boy လေးပါတဲ့................
Posted by Myanmar Gays Heaven at 9:13 AM
နွဲ့တာ​တော့လံုးဝမကြိုက်​ဘူး စိတ်​၀င်​စားရင်​ thuha99877@GMail.com
arr lann March 28, 2014 at 6:15 AM
Myanmar Gays Heaven March 28, 2014 at 8:00 AM
ကိုတော်ချောက တင်တုန်းကတင်ခိုင်းပြီး မျက်နှာပါတာတွေပြန်ဖြုတ်ပေးပါဆိုလို့...မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေ တောင်ပန်တယ်နော်
ကိုဦး December 22, 2015 at 11:54 PM
အားရအောင် လိုးပေးနိုင်မလား စိတ်တိုင်းကျစေရမယ် 09963368817
Mg Maung June 4, 2016 at 3:09 AM
Nya Hkinn March 28, 2014 at 12:05 PM
Anonymous July 31, 2015 at 11:18 AM
ပုံဘယ်လို ပို့ ရတလည်း ပြောပြပေးပါ
မိုက်တယ်ဟေ့ .... တွေ့ချင်တယ် ဒီလီးပိုင်ရှင်နဲ့ ...
chanmyae thaw April 2, 2014 at 3:23 AM
ကြိုက်တယ်ဗျာ ... မျက်နှာလေးမြင်ရရင်ကောင်းတယ် ... မျက်နှာပါတဲ့ပုံလေးကြည့်ချင်လိုက်တာဗျာ
Zuggo Peer April 7, 2014 at 3:27 AM
0931792708call par အားလုံးokya mal
yangon ကပါ မနွဲ့သော top real နဲ့တွေ့ချင်တယ် စိတ်ဝင်စားရင် ph 09420268254 or viber ကနေဆက်သွယ်ပါ ကိုတိုင်လည်းးမနွဲ့ပါ နေရာရှိတယ် အဆောင်မှာတစ်ယောက်ထဲနေတယ် ok wellcom all my top
viber 09799729016 yangon 1 night 50,000.တည်းခိုခန်းဖိုးမပါ friday only အားလုံး ok
Zuggo Peer April 7, 2014 at 3:36 AM
Sai Aungminnko April 7, 2014 at 5:57 AM
လေးစားပါတယ် ဆွေးနွေးအကြံတောင်းလိုပါ သည် ဖုန်းပေးနိုင် မလားဗျာ
Anonymous April 10, 2014 at 11:48 PM
တကယ်လား လိုးပေးမှာလား လိုးချင်၇င်0931204505 ကိုဆက်သွယ်ပါ
Mg Maung June 4, 2016 at 3:25 AM
Mg Maung June 4, 2016 at 3:31 AM
viber or call 09253723077
နွဲ့တာကော မနွဲ့တာကော အကုန်ချတယ် ခံချင်လာနိုင်တယ် supercoffeeman5@gmail.com ဘာလာလာဒေါင်းတယ် ကျားပုံပဲလာလာ မပုံပဲလားလား ချပေးတယ် နိုပါသောကျားကျားများလဲအားပေးသည်
Lovely Junction April 17, 2014 at 5:15 AM
ကိုကိုဦး December 22, 2015 at 11:48 PM
09963368817 တွေ့ချင်တယ် ဆက်ပေးပါ
နေပြည်တော်ကပါ kothet.npt2015@gmail.com ကို အက်လိုက်
bot များ ဆက် သွယ်ပါ
ချော တွင်းကုန်း က မိတ် ဆွေလည်း
kyue October 16, 2015 at 10:17 AM
ဖင်​အရမ်းလိုးခံချင်​ပါတယ်​ မန်း​လေးကိုလာခဲ့ပါ စိတ်​တိုင်းကျ ပြုစု​ပေးပါ့မယ်​
yehtet aung May 28, 2016 at 10:33 AM
0933275062 viber use.I am bot
kyue October 24, 2015 at 1:55 AM
Viber use 09256277226
ဆက်သွယ်ပါ 0943180949 viber use. သန်လျင်ကပါ
yehtet aung May 28, 2016 at 10:39 AM
Anonymous December 3, 2014 at 7:17 PM
bot cute ပါ ရန်ကုန်ကပါ တီများနဲ့တွေချင်ပါတယ် ဖုန်း-09-799733781 ဆက်သွယ်ပါ
Ko Top December 13, 2014 at 12:17 PM
hobby love July 7, 2015 at 9:47 AM
၇န်ကုန်က တီကြီး2များနဲ့တွေချင်တယ် အသားဖြူချောပါတယ် 09-253071758 ဆက်သွယ်ပါ အဆင်ပြေစေရမယ်
​ဝေလင်း January 31, 2015 at 6:12 AM
​နေပြည်​​တော်​ကပါ top only ပါ09421115244/09797871968 ကိုဆက်​သွယ်​ပါဗျ​ကျေးဇူး​နော်​သူငယ်​ချင်းအားလုံးကို
Kar Yan Lin Htet January 31, 2015 at 9:50 PM
ရန်ကုန်ကပါ ဆက်သွယ်ပါ Ver လုံးဝမနွဲ့ပါ heroboy399@gmail.com
thuyamin February 4, 2015 at 8:28 AM
tarr yarr March 8, 2015 at 9:07 AM
နေပြည်တော်ကပါ Verများဆက်သွယ်ပါ tawwinn.civil@gmail.com
Goshh... I want u so bad .... Mr Big Cock~~~will u phone me. 09420186635 I would really appreciate ..I m from ygn as well
Anonymous March 22, 2015 at 11:57 AM
hobby love July 7, 2015 at 3:31 AM
Anonymous March 22, 2015 at 11:59 AM
အသိအကိုတစ်​​ယောက်​ရှိတယ်​ဗျ အသက်​ ၂၂ ရှိပြီ ရန်​ကုန်​ကဘဲ ဆာ​နေတဲ့ bot ​တွေကို ဖြည့်​ဆည်​​ပေးတဲ့ Top တစ်​​ယောက်​ပါ YUFL တက်​​နေတယ်​ ph no က 09421760544 အရပ်​က ၅ ​ပေ ၁၁
gipsy bird July 1, 2015 at 7:48 PM
hobby love July 7, 2015 at 3:26 AM
Again Heart September 4, 2015 at 6:52 PM
Moe Thauk September 23, 2015 at 12:07 PM
kyue October 1, 2015 at 8:19 PM
htay Ye'htoo October 21, 2015 at 1:08 AM
Thar Lay January 14, 2016 at 12:58 AM
Kaung Zaw Htet ywa mu, potato Nae video tin pay lite prr Htet pee
thuyamin May 7, 2016 at 3:04 AM
thuyamin May 7, 2016 at 3:06 AM